Uber akarayira kumisa mashandiro ayo muSlovakia
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Slovakia Kupwanya Nhau » Uber akarayira kumisa mashandiro ayo muSlovakia
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Slovakia Kupwanya Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Dare reSlovak rakaraira Uber kuti imise mashandiro ayo munyika, ichipindura danho rakaitwa nevatyairi vematekisi avo vanoti basa rekukwira vatasvi rinomiririra makwikwi asina kukodzera.
Sarudzo iyi yakatanga kushanda munaKurume 6, asi zvakaziviswa neChipiri chete uye mabasa eUber aive achiri kuwanika muguta guru reSlovak Bratislava.
"Mupomeri anosungirwa kurega kubvumidza vanhu vasingakwanise kuita zvinodiwa nemutemo… kuita mabasa ematekisi muSlovakia," mutauriri wedare, VaPavol Adamciak vakadaro neChipiri.
Sangano revatyairi vematekisi akasimbiswa vakamhan'ara mhosva munaNdira. Yakati vatyairi veUber havasvitse zvinodikanwa zvevatyairi vematekisi, uye mota hadzi svike nekuchengetedzeka uye nemitemo yezvinodiwa zvekufambisa mabasa.
Uber yakatarisana nemitemo yekudzora uye yepamutemo kutenderera pasirese pakati pekushorwa kubva kune echinyakare taxi services.